Nhau - Ruramisa Kudzvanya kweTayi MuZhizha
Kusvika kwechirimo kunoreva kuti vanhu vanoda kwazvo kutyaira vachidzika kunzvimbo dzinoyevedza kuti vatonhore mukudziya kwezhizha.
Zhizha harisi chete chiratidzo chenguva yekunakidzwa.Kusvika kwezhizha kunorevawo kuti wakotire pressurezvichachinja.Mavhiri ose ari maviri, ari pamusoro kana kuti asina kukwira mudenga, anopa njodzi huru yemumugwagwa uye vatyairi vanopinda munjodzi yekukuvadza zvakaipisisa ivo nevamwe.Naizvozvo,kumanikidzwa kwetai muzhizhainofanirwa kugara ichitariswa kuti isaite zviitiko zvisingaite.
Chikonzero chatiri kusimbisa pachirimo ndechekuti kudzvanywa kwetai kunochinja zvakanyanya muzhizha.Naizvozvo, vatyairi vanofanirwa kungwarira zvakanyanya pavanenge vachityaira mumwedzi yezhizha.Shanduko ye12°C inoreva kuti matai acharasikirwa kana kuwana 1 PSI (pound per square inch).Naizvozvo, kana kudzvanywa kwetayi kusina kunaka, unogona kutarisira matambudziko akawanda mukutyaira kwako.
Ukuwo, vhiri rakanyatsofefeterwa zvakanaka rinoita kuti ushande zvakanaka peturu, kubata, daro rebhureki, kuterera, uye kukupa kufamba zvakanaka.Zvakapesana zvinoitika kanakumanikidza kwetai chaikohaina kuchengetedzwa.
RAI RASVIKA PASI
Tai rakapindwa nemhepo zvinoreva kuti pamusoro pevhiri pari kusangana nemugwagwa.Iyo inoderedza mota yako uye inokanganisa hupfumi hwemafuta ako.Zvakare, matai akadzikira pasi anoderedza hupenyu hwematayi, zvichireva kuti uchafanirwa kuisa mari mumatayi matsva zvakare.
Kana vhiri razarirwa zvakanyanya, nzvimbo shoma shoma inosangana nemugwagwa.Zvinokonzera kuti vhiri ripere nekukurumidza uye zvisina kuenzana.Kunze kweizvi, chiitiko chekutyaira chinova chakaomarara, nepo kupindura uye mabhureki zvichikanganiswa zvakare.
KURENGA KUDIKIRWA KWEMATYA
Chinhu chekutanga chekutsvaga kuziva kudzvanywa kwetayi ndicho chikwangwani chetairi, chinogona kuwanikwa pamusuwo wemota, pagonhi kana gonhi rebhokisi rebhokisi.Mune dzimwe mota, inenge iri padhuze negedhi remafuta.Ichakuudza iyo yakanyanya kudzvinyirira matayi, maererano nemugadziri.Ndapota ramba uchifunga kuti mota zhinji dzine madhindindi akasiyana ematayi emberi nekumashure.
Pasina mamiriro ezvinhu, kumanikidzwa kunofanira kuwedzerwa kusvika kune yakakwirira yepamusoro sezvo inogona kukonzera kuputika kwetai.Paunenge uchityaira, vhiri rinopisa, zvichiita kuti mweya uri mukati memhepo uwedzere.Nokudaro, kana tire yatova pahupamhi hwepamusoro, ipapo ichaputika.
Imwe nzira yekuziva kuti kudzvanywa kwematayi kwakaringana ndeye Tire Pressure Monitoring System (TPMS).Mota zhinji dzemazuvano dzinouya neTPMS, iyo inokuzivisa iwe kana kudzvanywa kwetai kuri pazasi pedanho rinokurudzirwa.
Vanamazvikokota vanokurudzira kutarisa kudzvanywa kwetai mangwanani sezvo tembiricha yevhiri iri pakadzika ipapo.Panguva iyoyo, kumanikidzwa kwetai kunofanira kunge kuri 2-4 PSI pasi pehupamhi hwepamusoro.Kana iwe wakatyaira mota, rega mota imbozorora kwemaawa mashoma, usati watarisa kudzvanywa.Zvakare, ita shuwa kuti mota haina kumira muzuva, kana kuti pavement haina kupisa zvakanyanya.
Nguva yekutumira: Jun-22-2021